[ November 14, 2019 ] Who is the new speaker of Puntland Parliament?	English News
Madaxweyne Farmaajo oo masuuliyiin Itoobiyaan ah kusoo dhaweynayaan garoonka diyaaradaha Addis Ababa. [Xigashada Sawirka: Villa Somalia]
Waa kuma guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland?
Cabdirashiid Yuusuf Jibriil waxa uu ahaa abwaan curiya heesaha oo kunool dalka UK kahor inta uusan sanadkii 2013 ku biirin ololihii doorashada Puntland, isaga oo taageeray Madaxweynihii hore Cabdiweli Maxamed Cali. Intii lagu guda jiray [...]
Somali forces, backed by AMSIOM capture Al-Shabab stronghold in Jubaland
Kismayo-(Puntland Mirror) The troops of Somali federal government and Jubaland administration backed by AMISOM on Thursday seized the Al-Shabab stronghold of Abdalla Birole. The allied forces have launched an operation against Al-Shabab militants in Kismayo [...]
Turkiga oo Soomaaliya u diray 15,000 tan oo caawimaad ah inta lagu jiro bisha Ramadaan
Ankara-(Puntland Mirror) Turkiga ayaa 15,000 tan oo gargaar ah u soo diray Soomaaliya inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Isaga oo la hadlayay wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu Kerem Kinik oo ah madaxweynaha [...]